Kporie ememme nke Ìhè na Boimorto, A Coruña | Akụkọ Njem
Ememme Ìhè na Boimorto
Susana Garcia | | General, Oge ntụrụndụ
N’oge ugbu a, ọ ga-ekwe omume ị gaa ememme imerime ememme egwu na mpaghara anyị niile. Fọdụ abụrụla ndị dị mkpa n’obodo ruo ọtụtụ afọ, mana ndị ọzọ jisiri ike ido onwe ha n’ime obere oge, dịka Boimorto Light Festival, nke pụtara ọtụtụ ihe.
Oge a anyị ga-ahụ ebe na ihe Ememme ìhè, na mgbakwunye na ihe ndị kpatara ya ji bụrụ ọkwa dị mkpa nke na-ekwesịghị ịhapụ. E nwere ọtụtụ ihe na-eme ka ememme a pụta ìhè site na ọtụtụ ndị ọzọ, site na ọnọdụ ya na nzube ya.
1 Akụkọ banyere Ememme Ìhè
2 Ọnọdụ ememme
3 Otu dị iche iche gbadara na ememme ahụ
4 Facilitieslọ ọrụ ememme
5 Ememme ndị ọzọ nke ndị Galician
Akụkọ banyere Ememme Ìhè
Ememme Ìhè malitere n’afọ 2012 site n'aka onye ọbụ abụ Luz Casal. A mụrụ onye omenkà a na Boimorto, ebe a họọrọ ịme mmemme ahụ. Kemgbe ahụ ememme a na-eto eto ma na-emeziwanye, ya na ndị omenkà ama ama site na mpaghara dị ugbu a. Ma ihe omume a amughi dika oghere ozo di egwu, kama amuru ya na ebum n’uche iji bulie ego. Ọ bụkwa ụzọ isi gosipụta mkpa ime ime obodo na mmepe ya, yana ntinye aka nke ndị na-ese ihe na ime obodo Galician. Kemgbe 2012, a na-eme ememme kwa afọ, n’ime ọnwa Septemba, na ụbọchị ndị na-emekwa ka ọ dịrị mfe ịga mmemme ahụ, ebe ọ bụ na ọ naghị adaba na ndị ọzọ, ihe na-eme n’oge ọkọchị.
Ememme a anaghị ewere ọnọdụ na obodo ukwu ma ọ bụ na etiti, kama ọ na-ewere ọnọdụ na Ọnụ ọgụgụ Boimorto. Obodo a dị na mpaghara La Coruña, n'ime ime obodo. Ọ dị kilomita iri anọ na anọ site n’obodo Santiago de Compostela. Ọ bụ ime obodo na ebe dị jụụ, nke na-anabata ọtụtụ narị ndị ọbịa n’oge ọnwa Septemba, bụrụ ebe etiti ndị nta akụkọ na ndị kpebiri ịnụ ụtọ mmemme ahụ.
Otu dị iche iche gbadara na ememme ahụ
Ụfọdụ n'ime ìgwè ndị na-egwuri egwu na mbipụta ikpeazụ Ha bụ Lovehụnanya nke nwanyị nwere mmasị nwanyị, Kase.O, Eskorzo, Os Resentidos, Josele Santiago, Mmekọahụ Mmekọahụ, Christina Rosenvinge, Sr. Chinarro, Andrés Suárez, Elliott Murphy na Olivier Durand, Mi Capitán, Seguridad Social, Vargas Blues Band, Javi Maneiro, Ezigbo keylọ Mkpụrụ, Agoraphobia, Riff Raff, Marilia Andrés, Nunatak, Chris Barron, Fredi Leis, Monoulious DOP, Rafa Morcego, Los Vinagres, Mordem, Conchita, Rodrigo Mercado, Los Motores Rock de Vigo, Arzúa Music Band, Muscle!, Pelepau , MJ Pérez, Tempo Norte, Santiaguiños de Boimorto, Xoán Curiel, Pandereteiras de Verducido, Zirconita, Dani Barreiro & Enyi na Pedro el Granaíno. Na mbụ enweela otu dịka Mago de Oz ma ọ bụ Jarabe de Palo. Na mbipụta ọ bụla ị nwere ike ịhụ n'ọdịnihu ìgwè ndị ga-egwu, ka o wee nwee ike ịmara ndị omenkà niile ịzụta tiketi.
Facilitieslọ ọrụ ememme
Na ememme enwere ihe na-adọrọ mmasị mpaghara ahịa nke ghọrọ otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị. N'ahịa ọ ga-ekwe omume ịchọta ụlọ ahịa na-atọ ụtọ nri ma ọ bụ ngwaahịa na ngwaahịa na ọrụ aka. Site na ntinye aka n'akwụkwọ na ngosipụta na igosi nri. O kwere omume ịhụ njegharị nke ememme ahụ iji mara mgbe enwere ike ịhụ ihe ngosi dị iche iche na ịnwale ụtọ iji ghara ịhapụ otu n'ime ha.
Na ememme a, enwere ohere maka onye ọ bụla. N'ihi ụlọ ọrụ ya na ọtụtụ ndị na-ese ihe, ọ bụkwa ebe ndị ezinụlọ họọrọ iji nwee ọ enjoyụ n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ ya mere ha ji nwee a ebe ụmụaka nke umu ntakiri g’enwe obi uto. N’ebe a enwere egwuregwu, emume na ebe obibi.
Ebe ntụrụndụ ọzọ bụ sinima na ihe nkiri marquee. N'ime oghere a, ị ga - ahụ ihe nkiri na-atọ ụtọ, mkpụmkpụ, monologues na mmemme ihe nkiri. Oghere Mans bụ ebe ị ga -ekwu maka ịchụ nta ego na ịga mkparịta ụka na-atọ ụtọ n'okwu ndị dị ugbu a.
El Oghere Gastro Mahou Ọ bụ ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ oge dị iche iche nke ngosi site na ndị isi osi nri Galician. Ebe iji nwaa ihe ọhụrụ na nri dị mma.
Ememme ndị ọzọ nke ndị Galician
Galicia bụ ebe na-ewu ewu, yabụ n'oge ọkọchị, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị mmemme niile, ememme na nnọkọ. E nwere ọtụtụ ememme ndị ọzọ nwere ike ịmasị, ha na-emekarị ya n’ọnwa Julaị na Ọgọst. Na Portamérica bụ nnukwu ihe atụ, Nke kwagara n'obodo Caldas de Reis ma na-enye egwu site na otu kachasị mma na mpaghara mba. IVF na Vilalba, Lugo, na-emekarị ya na Machị ma ọ bụ Eprel. Ememme Mbilite n’ọnwụ na Viveiro bụ nnukwu akara ngosi mba na egwu igwe egwu. Ememe Ortigueira nke na-enye anyị otu dị iche iche ma bụrụ otu n'ime ndị kacha ochie. O Son do Camiño nke a na-eme na O Monte do Gozo na Santiago de Compostela ma ọ bụ Atlantic Fest na Illa de Arousa bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ememme Ìhè na Boimorto